Akụkọ Bible: N’Elu Ugwu Oliv - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE Jizọs ka ọ nọ n’elu Ugwu Oliv. Ndị ikom anọ ha na ya nọ bụ ndịozi ya. Ha bụ Andru na Pita, bụ́ ụmụnne abụọ, nakwa Jems na Jọn ndị bụ́kwa ụmụnne abụọ. Ihe ị na-ahụ n’azụ ha bụ ụlọ nsọ Chineke dị na Jeruselem.
O ruwo ụbọchị abụọ kemgbe Jizọs nọkwasịrị ịnyịnya ibu ma banye Jeruselem. Ụbọchị a bụ ụbọchị Tuesday. N’ụtụtụ ya, Jizọs nọ n’ụlọ nsọ ahụ. Ka ọ nọ n’ebe ahụ, ndị nchụàjà nwara ijide ya ka ha gbuo ya. Ma egwu tụrụ ha ime nke a n’ihi na ndị mmadụ hụrụ Jizọs n’anya.
‘Unu agwọ na ụmụ agwọ!’ ka Jizọs kpọrọ ndị ndú okpukpe ahụ. Ọ gwakwara ha na Chineke ga-enye ha ahụhụ n’ihi ihe ọjọọ niile ha mere. Mgbe nke ahụ gasịrị, Jizọs rịgotara n’Ugwu Oliv, ndịozi anọ ndị a wee malite ịjụ ya ajụjụ. Ị̀ ma ihe ha na-ajụ Jizọs?
Ndịozi a na-ajụ ya ajụjụ banyere ọdịnihu. Ha maara na Jizọs ga-akwụsị ihe ọjọọ niile a na-eme n’ụwa. Ma ha chọrọ ịmata mgbe nke a ga-eme. Olee mgbe Jizọs ga-abịa ọzọ ịchị dị ka Eze?
Jizọs maara na ụmụazụ ya nọ n’ụwa agaghị enwe ike ịhụ ya ma ọ bịa ọzọ. Ọ bụ n’ihi na ọ ga-anọ n’eluigwe, ha agaghịkwa enwe ike ịhụ ya n’ebe ahụ. N’ihi ya, Jizọs gwara ndịozi ya ihe ụfọdụ ga na-eme n’ụwa mgbe ọ ga na-achị dị ka Eze n’eluigwe. Gịnị bụ ụfọdụ n’ihe ndị a?
Jizọs sịrị na a ga-enwe nnukwu agha dị iche iche, ọtụtụ mmadụ ga na-arịa ọrịa, nọrọkwa n’agụụ, mpụ ga-aka njọ, a ga-enwekwa oké ala ọma jijiji. Jizọs kwukwara na a ga-ekwusa ozi ọma alaeze Chineke n’ebe niile n’ụwa. Ànyị ahụwo ka ihe ndị a na-eme n’oge anyị a? Ee! Ọ pụrụ ido anyị anya na Jizọs na-achị n’eluigwe ugbu a. N’isi nso, ọ ga-akwụsị ihe ọjọọ niile dị n’elu ala.
Matiu 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Mak 13:3-10.
Na foto a, olee onye nke bụ́ Jizọs, ole ndị kwa bụ ndị ahụ ha na ya nọ?
Gịnị ka ndị nchụàjà nwara ime Jizọs n’ụlọ nsọ, gịnịkwa ka ọ gwara ha?
Gịnị ka ndịozi Jizọs jụrụ ya?
N’ihi gịnị ka Jizọs ji gwa ndịozi ya ụfọdụ n’ime ihe ndị ga na-eme n’ụwa mgbe ọ malitere ịchị achị dị ka Eze n’eluigwe?
Gịnị ka Jizọs kwuru na ọ ga-ewere ọnọdụ tupu ya akwụsị ihe ọjọọ niile n’ụwa?
Gụọ Matiu 23:1-39.
Ọ bụ ezie na Akwụkwọ Nsọ gosiri na a pụrụ iji utu aha eme ihe, gịnị ka ihe Jizọs kwuru na Matiu 23:8-11 na-egosi banyere iji utu aha ndị e ji eto mmadụ eme ihe n’ọgbakọ Ndị Kraịst? (Ọrụ 26:25; Rom 13:7; 1 Pita 2:13, 14)
Gịnị ka ndị Farisii ji mee ihe iji gbalịa igbochi ndị mmadụ ịghọ Ndị Kraịst, oleekwa otú ndị ndú okpukpe siworo jiri ụzọ ndị dị otú ahụ na-eme ihe n’oge a? (Mat. 23:13; Luk 11:52; Jọn 9:22; 12:42; 1 Tesa. 2:16)
Gụọ Matiu 24:1-14.
Na Matiu 24:13, olee otú e si mesie mkpa ọ dị inwe ndidi ike?
Gịnị ka okwu bụ́ “ọgwụgwụ” nke dị na Matiu 24:13 pụtara? (Mat. 16:27; Rom 14:10-12; 2 Kọr. 5:10)
Gụọ Mak 13:3-10.
Olee okwu dị na Mak 13:10 nke na-egosi na ọ dị mkpa ka e kwusaa ozi ọma ngwa ngwa, oleekwa otú okwu Jizọs kwesịrị isi metụta anyị? (Rom 13:11, 12; 1 Kọr. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)
Amụma ndị ahụ Jizọs buru mezuru na nke mbụ ya n’oge ndịozi. Ò nwekwara ike imezu nke ugboro abụọ n’ọdịnihu karịa nke mbụ o mezuru?
Gụọ ihe a ka ị mata ihe anọ so n’ihe ndị ga na-emekọta ọnụ Baịbụl kwuru a ga-eji ama na ọgwụgwụ eruwela.